Kolontsaina Japoney, mahavariana tahaka an'io .. Vaovao momba ny dia
Japana Io no toeram-pialan-tsasatra tiako indrindra ary tsy reraka ny mandehandeha isaky ny afaka manao izany aho, izay, misaotra fa soa aman-tsara. Isaky ny dia hitako zava-baovao, na dia tokony hipetraka any mandritra ny fotoana lava aza aho hahatakatra izay rehetra hitako, izay rehetra reko, ary izay rehetra iainako.
La Kolontsaina japoney tena manokana izy io ary tsy isalasalana fa indraindray dia miafara amin'ny fieritreretana fa manohitra ny olana manerantany ny Japoney. Fa izany no fanaon'izao tontolo izao! Goavana, maro karazana, manan-karena toy ny isan'ny olona monina ao. Heveriko fa izany indrindra no tian'ny rehetra mandeha any Azia: ny halaviran'ny kolontsaina, miaina ny halehiben'izao tontolo izao.
1 Kolontsaina sy etikety japoney
2 Kolontsaina Otaku
3 Kolontsaina sy fiarahamonina japoney
Kolontsaina sy etikety japoney
Amin'ny ankapobeny dia afaka miresaka momba ny fomban'ny Esory ny kiraronao, miondrika ary aza tendreo. Ireo fanontaniana ireo dia eo am-bavan'ireo izay miverina avy hatrany amin'ny dia any Japon.
Ho an'ny mpizahatany dia mahafinaritra ny mahita izany any Japon dia tsy fanao ny mamela tendrony. Soa! Ny tipping dia tsy tavela any amin'ireo toerana mahazatra ny manao azy io: trano fisakafoanana, ohatra. Ny Japoney dia tsara amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ka na aiza na aiza no alehanao, any amin'ny trano fisakafoanana lehibe na tsena kely ao an-tanàna, dia hajaina hatrany ny fitsaboana. Ny fotokevitra dia hoe efa manana karama izy ireo ka tsy misy toro-hevitra. Tsy misy izany fiheverana izany fa ny torohevitra mety hitranga dia ampahany amin'ny karama, toy ny any Andrefana.
Esory ny kiraronao mahafinaritra ... mandra-panaonao in-dimy isan'andro. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, any amin'ny tempoly, any amin'ny trano fisakafoanana sasany, ao amin'ny efitrano fiakanjoan'ny fivarotana ... Eny, na dia ny manandrana akanjo izay hividiananao aza dia ilaina ny manaisotra ny kiraronao. Amin'ny fahavaratra dia milamina ny zava-drehetra, amin'ny ririnina ... Efa taloha ny fomban-drazana ary ny tsy hiditra ao anaty loto ao ivelany dia hiditra ao afovoan-trano izay, tatami.
Ao amin'ny tempoly sy trano fisakafoanana aza misy ny valizy handao ny kiraronao ary ho setrin'izany dia mahazo kapa ianao. Raha izaho manokana dia tsy tiako ny manao kapaoty an'ny hafa, fa any Japon dia tsy misy hafa.
Ary farany amin'ny resaka fitsipi-pitondran-tena dia efa nohamasinintsika fanajana. Tsy misy fiarahabana izay misy fifandraisana ara-batana sy fiankohoka mendrika toy ny miarahaba na manao veloma. Ny hoe manondrika dia midika fanajana na fankasitrahana ary misy zoro isan-karazany: ny ambany, ny fanajana bebe kokoa ampitaina na ny famelana ny fangatahana. Ny tsipika fohy sy fohy dia ampy hifampiarahabana amin'ireo olon-tsy fantatra.
Raha miditra amin'ny fivarotana na trano fisakafoanana ianao dia hitsena tsipìka foana ianao, hajaina ianao amin'ny maha mpanjifa anao, saingy tsy ilaina ny hamerenanao azy. Raha averinao io dia manantena valiny hafa. Andao lazaina fa mba ho mpizahatany dia azontsika ampiasaina ilay tsipika 15º. Tsara ho antsika izany.
Nanjary nalaza eran'izao tontolo izao ny kolotsaina Japoney tamin'ny famokarana zavakanto roa: ny Manga (ny tantara an-tsary Japoney), ary ny sarimiaina (Sarimiaina Japoney). Raha teraka tamin'i Astroboy ny zava-drehetra 60 taona mahery lasa izay, dia mbola manan-kery ankehitriny ny kolontsaina otaku miaraka amin'ny Attack of the Titans, Death Note na Tokyo Ghoul, ohatra.
Fa ho an'ireo mpizahatany efa zokinjokiny dia tsy azo atao ny manadino an'i Sailor Moon, Knights of the Zodiac, Macross, Evangelion, Dragon Ball sy ireo sarimihetsika mahafinaritra an'ny genius Miyazakai hayao.
Na dia tsy mahay Japoney aza ianao dia tsara tarehy ny mitsidika fivarotam-boky Japoney: fahanginana, varavarankely feno boky maro loko, manga maro be. Hatsaran-tarehy, tempoly otaku tsy misy maro hafa. Misy koa ny manodidina an'i Akihabara inona ny otakus ary mpilalao. Betsaka ny trano avo be misy tranombarotra kely ahafahanao mividy azy rehetra merchandisign azonao atao ny mieritreritra andian-tantara taloha sy ny fotoana.
Manga sy anime dia na aiza na aiza, amin'ny marika, horonan-tsary dokam-barotra. Ny marina dia ho an'ny otaku Japon dia EL destino.
Kolontsaina sy fiarahamonina japoney
Rehefa mieritreritra ireo firenena toa an'i Amerika Latina izay misy maha-zava-dehibe ny lesoka diso dia tsikaritrao avy hatrany fa hafa ny fiarahamonina Japoney satria tsy nanana fifindra-monina firyn. Ny fitomboan'ny harinkarena sy ny filàny ny mpiasa dia nandrakotra azy tamin'ny fidiran'ny vehivavy tao amin'ny tsenan'ny asa, ohatra, ary tamin'ny fanodinam-bokatra tao amin'ireo ozinina, saingy tsy nanana onja fifindra-monina avy amin'ireo firenena mifanila aminy.
Nanana teny filamatra foana i Japana: Firenena iray, firazanana iray, fa hatramin'ny fiandohan'ny taonjato io dia tsy zaka intsony io hevitra io ary ekena izany Ny fiaraha-monina Japoney dia tsy homogeneous. Raha ny marina, raha misy mahafantatra ny tantaran'ny Japoney dia tsy nisy izany satria ny vahoaka Ainu any avaratra dia teratany ary ny an'i Okinawa dia an'ny vahoaka Ryukyukan, ho an'ny fanjakana hafa mandrapahatongan'ny fanjanahana ny Japoney. Ny fandavana foko isan-karazany dia natanjaka tao amin'ny firenena ary raha ny marina dia tamin'ny 1994 vao nahavita toerana iray tamin'ny Diet Japoney ny mpanao politika Ainu.
Fa nifindra monina ve ny Japoney? Mazava ho azy, ny olona rehetra talohan'ny Ady Lehibe Faharoa sy aorian'ny. Ankehitriny ny vondrom-piarahamonina Japoney any Etazonia, Peroa, Brezila ary Arzantina dia anisan'ny lehibe indrindra any Amerika, ohatra. Saingy tsy fifindra-monina maharitra izany, toy ny an'ny Sinoa. Araka ny fanisam-bahoaka farany misy manodidina ny 750 japoney misy ra mifangaro ao firenena ary mponina vahiny iray tapitrisa sy sasany (Sinoa, Koreana, Filipiana ary Breziliana).
Raha mankany Tokyo ihany ianao anio dia hahita vazaha hatraiza hatraiza, mpandraharaha sy vehivavy ary mpampianatra anglisy, fa raha mandeha lavitra kokoa any afovoan-tany ianao dia mihena ny isan'ireo Kaokasianina na mainty. Raha fintinina, rehefa mankany Japon ianao dia hiainanao ireo traikefa rehetra ireo: hitsiky aminao izy ireo tsy an-kijanona, hiankohoka aminao izy ireo, tsy handao na oviana na oviana ianao, hiainanao ny kolontsaina otaku, hiala ianao ary hametraka ny kiraronao amin'ny fotoana rehetra ary mifalifaly. Be loatra ka te hiverina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Kolontsaina Japoney, mahaliana toy ny mampiavaka azy